Tag: ad hagaajinta | Martech Zone
Google wuxuu la mid yahay isbedelka. Markaa waxaa layaab leh inay layaab ku noqotay in Ogosto 29-keedii, ay shirkaddu soo rogtay isbeddel kale oo ku aaddan dejintooda xayeysiinta qadka, gaar ahaan wareegga xayeysiiska. Su’aasha dhabta ah ayaa ah - muxuu macnahoodu yahay isbadalkan cusub adiga, miisaaniyadaada xayeysiinta iyo waxqabadkaaga xayeysiinta ah? Google maaha mid siinaya faahfaahin fara badan markay isbeddelada noocaas ah sameeyaan, taasoo ka dhigeysa shirkado badan inay dareemaan mugdi sida ay tahay
Madbacad ahaan, mid ka mid ah go'aamada ugu adag ee lacag ku helida bartaada ayaa ah isu dheelitirka dakhliyada sii kordhaya ama baabi'inta khibradaada isticmaale. Waxaan la halganeynaa isku dheelitirnaanta sidoo kale - oo lagu darayo xayeysiisyo firfircoon oo bartilmaameed ah oo la xiriira adeegsadaha. Rajadeennu waa in xayeysiisyadeennu ay sii ballaadhiyaan waxa ku jira iyaga oo siinaya alaab ama adeegyo waxtar yeelan kara. Khasaaraha, dabcan, waa in booqdayaasha boggu ay bilaabaan inay si fudud u indhatiraan